Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Kronobergs län / Växjö
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 17 12 2021
Kusoo dhowoow Växjö - Magaalada ugu cagaarka badan Yurub! Växjö - Magaalada ugu cagaarka badan Yurub waxeey ka dhigantahay mustaqbal wanaagsan oo aan wax u dhimeyn bii'ada. Tiigsigu magaalado waa ineey noqoto magaalao wax lagu curiyo waxna laga soo saaro qaabka loo shaqeeynayana uu ahaado mid bii'ada u fiican, dhaqaale kobcaya, qalbi furnaan, wada jir u shaqeyn loo shaqeynayo mustaqbalka. Wadajir ayaan wax ku bedeli karnaa!
1,914 kiilomitir oo laba jibaaran
Karlskrona 107 kiilomitir
Kalmar 109 kiilomitir
Halmstad 131 kiilomitir
Växjö waa magaalo sii koreeysa waxaana ka jira qaab guryo oo kala duwan. Waxaad kireysan kartaa guri ama waxaad gadan kartaa guri. Waxaad degi kartaa magaalada, ama baadiyaha ama xaafadaha kale oo leh isusocod wanaagsan xaga gaadiidka ag. Degmada boggeeda internetka ah waxad ka heli kartaa sida loola xiriiri karo shirkadaheena guryaha kireeya.
Växjö waxaa loga hadlaa luqado badan, sida carabiga, soomaaliga, tigreega, ingiriiska, af-kurdiga, af-iiraaniga, teeylaandees, af-yukreen iyo romaaniyaan.
Växjö waxaa ka jira jaaliyado badan. Waxaad ka raadin kartaa diiwaanka jaaliyadahah ee degmada waxa aad xiiseyneysid. Diiwaanka jaaliyadaha waxaad ka heleysaa sida aad ula xiriiri kartid jaaliyadaha.
Gudaha iyo bannaanka bartamaha magaalada waxaad ka heleysaa dukaamo gacan labaad ah, halkaasoo aad ka heli kartid waxyaabo kala duwanoo fiican. Waxaa jira goobo lagu kulmo oo kala duwan oo loogu tala galay da' kasta waxaadna sameyn kartaa waxyaabo badan aad xiiseyneysid ama waxaad la qaxweyn kartaa asxaabtaada.
Xafiiska muwaadiniinta ee Araby wuxuu kaa caawinayaa inaad qaabka ugu fiican si sax ah u hesho gudaha bulshada, qoysaska qaxootiga ee cusubna waxay helayaan xitaa xarunta qaabilaadda ee Xarunta luqadaha iyo aqoonta.
Soo arag oo samee Goobo kulan Xafiisyada arrimaha maddaniga ah Xarunta luqadaha iyo aqoonta
Carruurta da'doodu eey u dhaxeeyso 1 illaa 5 sano waxaa loo hayaa iskoollada xanaanada carruurta. Waxa jira iskoollo xanaanada carruurta oo eey degmada gacanta ku heyso iyo gaar eey leeyihiin shirkado baraayfat ah.
Waxaa degmada Växjö ku yaal 40 dugisiyo hoosedhexe ah oo eey degmada gacanta ku heeyso. Iskoollada degmooyinka kasokoow waxaa jira iskoolo eey leeyihiin iskoollo madax bannaan. Degmada boggeeda internetka waxaad ka akhrisan kartaa macluumaad ku saabsan iskoollada kala duwan iyo sida aad ula xiriiri kartid.
Waxbarashada dadka waweyn ee degmada waxaa loogu tala galay ineey dadka waaweyn dhigtaan. Waxaa jira heerar kala duwan oo waxbarasho laga billaabo heer asaasi ah illaa iyo kor. Haddii aad wadanka ku cusubtahay waxaa jira Sfi, iswiidhish loou tala galay dadka ajnabiga ah.
Degmada bogeeda internetka ah waxaad ka heleysaa barnaamijyada waxbarasho oo dhan oo aad ka dalban karitd degmada. Växjö waa magaalo waxbarasho. Haddii aad rabtid inaad sii wadatid waxbarashada waxaa marka laga reebo machadyada dhigan kartaa jaamacadda Linnéuniversitetet.
Waxbarashada dadka waaweyn Iswiidhiska soo galooytiga Dugsiga dadka waaweyn Linnéuniversitetet
Xarunta caafimaadka ee 1177 waxaad weydiin kartaa su'aalo iyo talooyin iyo sida loo helo warbixin ku saabsan goobaha caafimaad ee Växjö. Waxaad booqan kartaa bogooda internetka ee www.1177.se ama waxaad wici kartaa taleefanka 1177.
Hel macluumaadka xiriirka iyo wakhtiyada furitaanka ee rugaha caafimaadka oo ku qoran Hagida daryeelka 1177 Vårdguiden. Akhri dheeraad ku saabsan dhakhtarka ilkaha. Region Kronoberg
Markaad la xiriireysid xafiisyada waxaad xaq u leedahay in laguu qabto turjumaan haddii aadan fahmeyn luqadda iswiidhishka. Degmada Växjö haddii aan nahay waxaan qabsanaa turjumaan marka aan leenahay kulamo aan ognahay in loo baahan yahay sida kulamada waalidiinta, kulanka wadahadalka ee ku saabsan waxbarashada ardayga kulanka xafiiska bulshada iyo kuwii la mid ah.
Siyaabo kala duwan ayaad ugu safri kartaa Växjö sida diyaarad, tareen, bas ama baabuur. Leemanka socodka ee basaska degmada Växjö weey wanagsan yihiin. Magaalada waxeey dadka ku dhiirri galineysaa ineey baaskiilka wadaan waxaana jira jidad badan oo baaskiillada eey maraan oo ku wareegs magaalada oo dhan.
Shirkadaha weey la xiriiri karaan xarunta ganacsiga ee degmada. Waxeey leeyihiin aqoon baaxad weyn oo ku saabsan qeeybaha kala duwan ee ganacsiga waxeey kalo xiriir la leeyihiin meelo kala duwan oo kuu fududeen karo inaad qorshahaaga ganacsi ka dhabeysid. si eey wax kasta si fudud kuugu dhacaan waxaa ku caawinaya shaqaale oo loogu tala galay caawinta shirkadaha degmada.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Växjö